(Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco ciidanka Haramcad & Ciidanka Ahlu Sunna - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco ciidanka...
Ciidamada HaramCad oo uu horjooge u yahay Farxaan Qaroole oo aay qaraabo yihiin MW Qoor Qoor oo kaashanaya kuwa Jabuuti ayaa howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo ka billaabay duleedka Dhuusamareeb oo aay isku aruursanayaan ciidamadii Ahlu Sunna & kuwa beesha Ceyr oo diidan in aay wareejiyaan hubkii Ahlu Sunna.
Waxaa hoggaaminaya howlgalkan taliyaha Ciidanka Haramcad iyo taliyaha Ciidanka Jabuuti ee jooga Galmudug. Ciidamada wadajirka ah ayaa la sheegay in ay sugayaan amniga islamarkaana la dagaal geli doonaan kooxaha dhibka geysta.
Waxaa laga dareemayaa magaalada Dhuusomareeb saan saan dagaal, waxaana si xowli ah ku socda qaban qaabo dagaal sokeeye, sida uu sheegay Axmed Rooble oo ka mid ah odayaasha degaanka.
Hoggaamiyaha Galmudug Qoor Qoor ayaa wacad ku maray in uu soo afjari doono kooxaha fallaagada ah isagoo ula jeeda beesha Ceyr mar uu shalay tababar u soo xiraayay ciidan la keenay magaalada Cadaado oo aay isku hayb yihiin Qoor Qoor.
Previous article(Xog) Halista ku soo wajahan ololaha dib u soo doorasho ee Maxamed Farmaajo
Next article(Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday & Lafagareen oo xaqiijiyay kursi